चन्दा थापा (चन्द्रिका), काठमाडौँ
राष्ट्रपतिज्यू तपाई यो देशकै सर्वोच्च पदमा हुनुहुन्छ तपाई भन्दा माथि अर्को कुनै पद छैन र तपाईभन्दा ठूलो अर्को कोही पनि छैन । यो तिनै नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जारी गरेको संविधानका कारण तपाई सर्वोच्च पदमा पुग्नु भएको हो । तर तपाई देशको सर्वशक्तिमान पदमा रहिरँहदा नै कन्चनपुरकी निर्मला पन्त घटना अहिलेसम्म वेवारीशे बनेको छ । पछिल्लो एकै सातामा घटेका बैतडीकी भागीरथी भट्ट प्रकरण, भारतको पटनामा बर्दियाकी १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना र सौतेनी बाबुबाट बलात्कृत भएपछि वीर अस्पतालको आइसीयुमा भर्ना भएर उपचार गराएको लगायतका घटनाले यो देशका महिलामात्र नभएर विश्वकै महिलाको पनि मुटु हल्लाएको छ । तर यी घटनामा तपाईको कुनै संवेदना नदेखिँदा झन पीडा थपिएको महस्ुस भएको छ ।
आफू राष्ट्रपति रहेको समयमा तपाईले महिला हिसांका घटनामा तदारुकता देखाएर यसलाई रोक्नका लागि राज्यका जिम्मेवार अंगलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा त्यो कतै देखिँदैन । तपाईले बरु जुम्लामा भएको आगलागीको घटनामा संवेदना जगाउनु भएको छ । आगलागी भएका परिवारका लागि राहत एवं पुर्नस्थापना र आवस्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । अनि, केटु हिमाल चढेर फर्किएका निर्मल पूर्जासहितको टोलीलाई बधाई दिँदै आफू गौरवान्वित भएको महसुस गर्नुभएको छ । तपाइले सुत्केरीको उद्धार लगायत गरेका केहि काम राम्रै मान्नुपर्छ तर, तपाईका सामाजिक संजालमार्फत तथा राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा कुनै विज्ञप्ति जारी गरेर यी अवोध चेली जो तपाईकै छोरीसरह हुन् उनीहरुलाई बलात्कार गरेर घाँटी च्यापेर मार्ने तथा जीवन नरक बनाउने क्रुर अपराधिको संजाय र पीडितलाइ न्यायका लागि तपाईका तर्फबाट एक शब्द पनि नआउनु भनेको महिला वर्गका लागि मात्र नभएर यो राष्ट्रकै लागि दुःखद भएको महसुस मैले गरेको छु ।
अपराधिलाइ कठोर कारवाही गरेर पीडितलाइ न्याय दिनुभयो भने मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन जनताले तपाइलाइ साथ दिनेछन महामहिम ज्यु । इतिहासले अवस्य खोज्नेछ राष्ट्रपति ज्यू, छोरीहरु बलात्कृत भएर ज्यान गुमाएको घटनामा तपाईले मौनता साँध्नु भनेको इतिहासलाई औला ठड्याउने बाटो तपाई आफैले बनाउनु हो । देशका हरेक आमाहरु यी दर्दनाक घटनाले रोइरहँदा हरेक छोरीहरुले न्याय नपाउँदा तपाई शितल निवासमा कसरी आरामले निदाउन सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यू ?
यो देशको एउटा सचेत नागरिक भएको नाताले यस्ता घटनाले पटक–पटक मन विक्षिप्त हुन्छ । अनि तपाईलाई सम्झन्छु । राष्ट्रपतिले केही बोलि दिए हुने आफ्नो पदको मान र मर्यादा राखेर महिला हिंसा र बलात्कारपछि भएका घटनामा उहाँले आगलागीका घटनामा संवेदना जनाएजस्तै पीडा व्यक्त गर्दै राज्यका सम्बन्धीत निकायलाई हरबखत झकझक्याउने काम गरिदिए हुने भन्ने आस लाग्छ तर, राष्ट्रपतिज्यू मैले तितो पोख्नैपर्छ तपाई, तपाईका सल्लाहकार, तपाईको सचिवालय किन अनविज्ञ छ यस्ता घटनामा ? किन कुनै संवेदना जनाउँदैन ? किन तपाई यस्ता घटनामा औला ठड्याएर भन्नु हुन्न ‘आजदेखि कुनै छोरीले बलात्कृत हुनुु नपरोस् कुनै महिलाले घरेलु हिंसा भोग्नु नपरोस् तथा पीडितका परिवारलाई न्याय दिन अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएर अपराधिलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर अर्को व्यक्तिले यस्ता अपराध गर्नुभन्दा पहिले दशपटक सोच्न बाध्य बनाइनुपर्छ भन्ने’ आदेश\_निर्देशन किन दिनुहुन्न राष्ट्रपतिज्यू ?
देश यस्तो विषम परिस्थितिमा छ । देशमा यस्तो परिस्थिति आउनुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईको पनि सहभागीता छ भन्ने आरोप तपाईमाथि अर्को रुपमा आइरहेको छ । यहिबेला देशका छोरीहरु धमाधम अपराधिको चंगुलमा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन् । उता सिन्धुलीकी देवकी नेपालीले साँझ विहान हातमुख जोर्नकै लागि समस्या भएका कारण आफ्ना दुई छोराछोरी काखमा च्यापेर सुनकोशी नदीमा हामफाल्नुपर्ने घटना कति मुटु पोल्दो छ राष्ट्रपतिज्यू ! तपाई यो देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका बेला तपाई र म जस्तै यो देशकी अर्की महिलाले यसरी आफ्ना छोराछोरीलाई कम्मरमा बाँधेर सुनकोशीमा हाम फाल्नुपर्ने बाध्यता र अवस्था कसरी आइलाग्यो राष्ट्रपतिज्यू यस्ता घटनालाई तपाईले अन्र्तमनले केलाउनुपर्ने होइन र ?
हुन त मैले नेपालको संविधान पूर्णरुपमा अध्ययन गरिनसकेकोले त्यसमा तपाई तथा तपाईको पदलाई यस्ता घटनामा बोल्न मिल्दैन भन्ने पो छ कि त्यो संविधानका पाना पल्टाएर हेर्नैपर्ला राष्ट्रपतिज्यू ! तपाइले प्रधानमन्त्रीज्यूका दफा समेत मिलाउने गरेको बर्तमान परीप्रेक्षमा प्रधानमन्त्रीलाइ नै आदेश दिएर यस्ता घटना रोक्ने मनोबिज्ञान सृजना गर्न किन सक्नुहुदैन । तपाईले आगलागीमा संवेदना जगाएजस्तै यस्ता घटनामा पनि मानविय संवेदना जगाउन मिल्दैनथ्यो र ? त्यो पनि मिल्थेन भने, विद्यादेवी भण्डारी फाउन्डेशन खोलेर देशैभरीका छोरीहरुको आत्मरक्षा र सवलताका लागि कार्यक्रम ल्याउन पनि सक्नुहुन्थ्यो । जहाँ तपाईका दुई छोरीहरुजस्तै यो देशका लाखौ छोरीहरुले तपाईको बलियो अभिभावकत्व पाएको महसुस गर्ने थिए । अपराधिलाइ कठोर कारवाही गरेर पीडितलाइ न्याय दिनुभयो भने मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन जनताले तपाइलाइ साथ दिनेछन महामहिम ज्यु । इतिहासले अवस्य खोज्नेछ राष्ट्रपति ज्यू, छोरीहरु बलात्कृत भएर ज्यान गुमाएको घटनामा तपाईले मौनता साँध्नु भनेको इतिहासलाई औला ठड्याउने बाटो तपाई आफैले बनाउनु हो ।
देशका हरेक आमाहरु यी दर्दनाक घटनाले रोइरहँदा हरेक छोरीहरुले न्याय नपाउँदा तपाई शितल निवासमा कसरी आरामले निदाउन सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यू ?
१८ फागुन, काठमाडौँ । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले प्रधानमन्त्रीलाई…
पूर्व कमरेड केपी ओलीज्यू, तपाईंले हुल्लडबाज, सडकछाप र बाहुबलीको पार्टी…